Vaovao - Iza amin'ireo indostria no fanodinana vy vita amin'ny takelaka ampiasaina ao, ary inona avy ireo fepetra takiana manokana?
Iza amin'ireo indostria no fanodinana vy vita amin'ny takelaka ampiasaina indrindra ao, ary inona avy ireo fepetra takiana manokana?
Ny fanodinam-by vy amin'ny akorany dia manondro ny fanodinana takelaka matevina kokoa an'ny miaramila, ary mety hanana anjara toerana lehibe amin'ity fizotrany ity izy. Satria ny faritra namboariny manokana dia efa za-draharaha, noho izany amin'ny sehatra iray manontolo dia nahasarika ny sain'ny olona bebe kokoa ihany koa, ka amin'ny dingan'ny fanodinana dia tokony ho fantatsika mialoha ireo toe-javatra ireo izay ampiasain'ny indostria matetika.
Ny fampiroboroboana hatrany ny indostrian'ny elektronika fifandraisana tato anatin'ny taona vitsivitsy dia mitaky fitakiana fanodinana bebe kokoa hatrany amin'ny lafiny rehetra, ary miaraka amin'izay dia ho tena marim-pototra izy io, satria ny vokatra eo am-panodinana dia mety hahatratra ny takiana amboniny. Ny fampiroboroboana ny indostria Miatrika fiatraikany lehibe kokoa ihany koa ny ankamaroan'ny orinasan-trano sy vahiny fanta-daza dia mety mitaky ireo lafiny ireo, ka ho lasa zava-dehibe kokoa ny lafiny teknika.
Ny fampandrosoana ny indostrian'ny ascenseur
Rehefa mampiasa ny fanodinana vy amin'ny akorany fitaovana ianao dia ho hitanao ihany koa fa ny faritra maro amin'ny indostrian'ny ascenseur dia tena marim-pototra koa. Mandritra ny fizotry ny fampiharana dia misy karazany maro ny faritra, ary ny mpanamboatra lehibe tsirairay dia maro ny mpamatsy hanao fikarakarana sy fizarana ho azy ireo, noho izany dia tsy maintsy mitandrina ireo toe-javatra manokana ireo amin'ny fotoana ary afaka mahafantatra fiovana manokana amin'ny iray manontolo. orinasa. Hisy vokany tsara ho antsika rehetra ireo. Ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa izy io, noho izany dia tsy maintsy atao ny safidy marina.